Umongameli Robert Mugabe Uhlangana loMongameli Jacob Zuma Wele South Africa
Mabasa 08, 2015
Umongameli Robert Mugabe lomunye wakhe wakweleSouth Africa umongameli Jacob Zuma ngoLwesithathu baqhube umhlangano ePretoria wokuqinisa ubudlelwano bamazwe la womabili.
Umongameli Mugabe ukweleSouth Africa okwamalanga amabili kukanti umhlangano ofana lalo ucine ukuwenza ngo 1994 iSouth Africa ithola uzibuse. Amazwe la akhulume kakhulu ngokuthuthukisa ubudlelwano bawo kwezomnotho lezokuthengiselana acina ngokubhalelana izivumelwano ezinhlannu.
EleSouth Africa liqhube umkhosi obukekayo wokwemukela umongameli Mugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe emahofisini kahulumende eUnion Buildings ePretoria ngoLwesithathu.
Umongameli Mugabe uhlonisthwe ngokuhlatshelelwa ingoma yesizwe kanye lokutshayelwa inganunu ezingamatshumi amabili lanye.
Ngemva kwalokho kube yisikhathi sokuthi inkokheli zombili lezi ziqhube umhlangano wazo. Uthe uphela lumhlangano sekubhalelwane izivumelwano ezinhlanu. Amazwe omabili avumelane ukusebenza ndawonye enhlelweni zokonga amanzi, ukuncedisana kwezokungena kwempahla emingceleni, asebumba ikomishini ezabona ngokulandelwa kwezivumelwano zonke eziphakathi kwamazwela womabili.
Abuye avumelana njalo ukucebisana enhlelweni zabameli bamazwela womabili kanye lenhlelweni zezomnotho lokuthengiselana.
Umongameli Zuma uthi lezi zivumelwano seziphe amazwe womabilila indlela zokuqinisekisa ukuthi zonke inhlelo zokuthengiselana ezikhona ziletha inzuzo emazweni la womabili.
Lokhuke zindaba ezimnandi kweleZimbabwe njengoba okwamanje eleSouth Africa lithengisela iZimbabwe impahla ezibiza amabhiliyoni angamatshumi amabili lamhlanu amarandi kanti eleZimbabwe lona lithengisela iSouth Africa impahla ezibiza amarandi angamabhiliyoni amabilinje kuphela.
Umongameli Mugabe laye ungcome kakhulu izivumelwano ezenziweyo wathi zizathuthukisa kakhulu ubudlelwano bamazwela womabili kwezokuthengiselana, ezomnotho, ezenhlalo kazulu kanye lakwezombusazwe.
Ubuye njalo wabonga kakhulu eleSouth Africa ngokwemukela izigidi zezizalwane zeZimbabwe esezibalekele kweleSouth Africa ngenxa yokoma kwezomnotho.
Endabeni zezwekazi leAfrica, omongameli bobabili laba bakhulume ngendlela zokuthi kuhlale kulokuthula babuya basola kakhulu ukuhlasela okusanda kwenziwa ngamalwa ecatsha kweleKenya.
Baphathe njalo indaba zomhlaba jikelele bakhuthaza ikhansili yezomvikela enhlanganisweni yeUnited Nations ukuthi iqede umkhuba wamazwe amahlanu ale ikhansili angontando kayiphikiswa. Umongameli Mugabe uthi umkhuba wokuthi izinto ezivunyelwana ngamazwe onke kule ikhansili zidilizwe ngamazwe amahlanu, mubi njalo wenza sengathi la amanye amazwe yiziphukuphuku.